DHAGAYSO: Madaxweynaha oo ku baaqay in la joojiyo dagaalka Guriceel ka socda – Radio Muqdisho
DHAGAYSO: Madaxweynaha oo ku baaqay in la joojiyo dagaalka Guriceel ka socda
Isagoo u waramayay laanta af-Soomaaliga ah ee idaacada BBC-da, madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomalia mudane Xasan Sheikh Maxamuud ayaa ka hadlay arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin dagaalka ka socda Guriceel, musuq maasuqa iyo waxa dowladda uga qorsheysan iyo arimo kale .
Madaxweynaha oo ku sugan dalka Jarmalka ayaa laga xumaado ku tilmaamay dagaalladii dhiiggu ku daatay ee ka dhacay degmada Guriceel ee gobolka Galgaduud, waxaana uu ugu baaqay dhinacyada halka isku haya in wada hadal lagu xaliyo tabashada jirta isagoo ugu baaqay in cid kasta oo tabasho qabta ay dowladdu diyaar u tahay in ay dhageysato cabashadeeda.
Madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee somalia mudane xasan sheikh maxamuud ayaa waxaa uu ka hadlay arimo la xiriira musuq la sheego in uu ka dhex jiro hay’adaha dowladda qaarkood ayadoo dhawaan xafiisyada xeer ilaalinta iyo hanti dhowrka guud ay soo bandhigeen eedeymo la xiriira musuq maasuq jira. waxaana uu sheegay madaxweynuhu in cid kasta oo lagu helo arrintaas sharciga la marsiinayo ayadoo la raacayo shuruucda dalka u taalla.
Ugu dambeyn madaxweynuhu wuxuu sheegay in caafimaadkiisu uu wanaagsan yahay oo uu baaritaan guud oo uu mar walba isku sameeyo uu u tagay Jarmalka. Ayadoo sidoo kale ay jiraan shaqooyin kale oo dowladeed oo uu u tagay waddankaas.
Qeybtan hoose ka dhagayso warbixinta
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir oo tacsi u diray dowladda iyo shacabka Jabuuti